China stereo headset-modelC3 Nlụpụta na Factory | NUEVASA
Kei Onyinye emana iP 11 ...
Egwu ohuru na onu ndu ...
iPhone 11 Pro nwere otu ...
Maka ndị na-eto eto n'oge a, gịnị bụ igweisi? Igwe ntị bụ ụzọ ụzọ ntụgharị. Ọ na-anabata akara eletrik nke onye mgbasa ozi ma ọ bụ onye nata mgbasa ozi zitere, ma gbanwee ya ka ọ bụrụ ụda ebili mmiri a na-anụ site na iji ọkà okwu dị nso na ntị. Isi ekwe na-adịkarị mfe iwepụ ihe ọkpụkpọ mgbasa ozi na conn
Si echiche nke mmepe nke dum audio ụlọ ọrụ, wireless ekweisi ka bụ ihe ọhụrụ, na mmepe oge adịghị anya. Ọ ka na-agbago. Nchọpụta ndị ọrụ na-aga n'ihu na-abawanye, na atụmanya ndị ọrụ maka ekweisi ikuku na-abawanye. Nke a bụ ihe ụlọ ọrụ na-atụ aro. Nnwale ọhụrụ. Ka ọ dị ugbu a, isi ihe ndị ọrụ kachasị echegbu onwe ya gụnyere ịda ụda, ndụ batrị na ike izipu ikuku. Site na echiche data, ikike izipu ikuku nwere ike ibute mkpa nke ndị ọrụ, ma enwere ikike dị ukwuu maka mmelite na ogo ụda na ndụ batrị. Malite na isi abụọ maka mmelite, ekwenyere m na ọ ga-adị mfe ịdọta uche ndị ọrụ n'ọdịnihu.
N'ezie, enwere ike kee ekweisi n'ọtụtụ ụdị. Ekweisi na nkewa dị ka ike ha akakabarede ụzọ, tumadi gụnyere: na-akpụ akpụ eriri igwe, na-akpụ akpụ iron, electrostatic na isomagnetic. Site na usoro ihe eji arụ ọrụ na nke arụ ọrụ, enwere ike kewaa ya n'ime oghe ma mechie; site n'ụdị a na-eyi, e nwere akwa ntị, ntị ndị kwụ ọtọ, na ntị na akwa isi; site na onu ogugu ndi nwe, enwere nti na ekwe ekwe na otutu; dị iche na isi ụda, enwere ike kewaa ya na ntị ntị na-arụ ọrụ na nti ntị na-agafe agafe; A na-akpọkarị ntị ntị na-arụ ọrụ na ntị ntị.
Ngwaahịa a na-etinye aka na ntị, na-ekwekọ n'ụkpụrụ ergonomic n'ụzọ zuru oke, na-adaba na akpụkpọ ahụ dị nro silica gel, na-enye gị nkasi obi site n'ime ruo n'èzí. Weta ọ comfortableụ na-enweghị ntụsara ahụ nke egwu.
Nke gara aga: Ọkachamara n'iji ya mere isi-ihe atụC600
Igweisi ekweisi Bluetooth
Agbanwe na Ntị
Na Ntị gamer
Na nti ekweisi USB
Na Ear Pro Gamer
Remax Na ntị
Ekweisi Bluetooth mara mma
Ikuku Bluetooth Ikuku
Ikuku stereo ekweisi
Egwu ohuru na-enwe obi ụtọ ndụ na isi-X1
Egwu ohuru na-ekpori ndụ na isi ekweisi-R400
Ọkachamara n'iji ya mere isi-ihe atụC600
Egwu ohuru na-enwe obi uto na isi ndu-E500
Egwu ohuru na-enwe obi ụtọ n'isi nke isi-c700
Egwu ohuru na enwe obi uto na ndu-C500 tinyere